Iyo gumi mitambo yakanakisa yekupona yePC | Gadget nhau
Iwo gumi akanakisa ekupona mitambo yePC
Paco L Gutierrez | | General, videogames
Rudzi rwekupona rwakapararira zvakanyanya mumakore achangopfuura, kuwedzera kwehunyanzvi hwemaPC edu uye enjini dzemifananidzo dzinoenderera dzichizadza rudzi nehupenyu uye zvakasiyana izvo pasina mubvunzo zvine vateveri vazhinji. Tine kubvira Tumira nyika dzeapocalyptic dzakapindirwa neZombies, nzvimbo odysseys, kuputsika kwechikepe pamakungwa akakwirira, kunyangwe zera remadinosaurs. Nyika dzakasiyana dzinoenderana nenzira imwechete, kupona seicho chete chinangwa chekuzadzikisa.
Muchinyorwa chino tinoda kuongorora gumi ayo mumaonero edu akaratidzira mhando yacho zvakanyanya, inokwanisa kutichengeta takabatana kwemwedzi, tiri vaviri uye tiri toga, tichiita ruzivo rwedu rwekunakidzwa. Chero chinhu chinoenda chero bedzi iwe uchirarama, kuvhima, kuvaka, kutiza, kudya, kurara uye pamusoro pezvose kurwisa chero dambudziko. Pamusoro pekubatana, chimwe chinhu icho pasina mubvunzo chinoita kuti zvinhu zvive nyore kwazvo kwatiri mune ino inonakidza vhidhiyo yemitambo genre. Gara nesu kune gumi rakanakisa mienzaniso yekupona kwePC.
1 Areka: Survival vakashanduka
6 State of Ruchiparara 2
7 Green Gahena
Areka: Survival vakashanduka
Zera remadinosaurs rinodzoka kuhupenyu hwedu neiyi inonakidza yekutanga-munhu kupona mutambo. Haisi iyo yakanyanya kunatswa vhidhiyo mutambo pamusika, asi kana iri yeakanyanya kufarirwa uye anonakidza mumakore apfuura. Iyo ine akawanda maitiro ayo anoita kuti kukura kwayo kuve kukuru uye chiitiko chinopfumisa chekupona uye chiito. Zvese inoitika pachiwi chine njodzi chizere nema dinosaurs.
Mutambo wakavhurika nyika, saka isu tine mepu yese yakavhurwa kubva pakutanga, Yakatanga semutambo wekutanga wekuwana, saka vashandisi vekutanga vakatambura bugs dzisingaperi izvo zvakatadzisa kunakidzwa kwakadzama kwaro. Iye zvino takatarisana neruzivo rwekuti tigare takachengeteka tinofanirwa tora chikafu nemvura, chinja kuchinjika nekukasira kwetembiricha.
Kunyangwe tikadambura, hunhu hwedu hunoramba hwakanyura munyika, saka zvakakosha kuvaka pekugara apo patinogona kurara husiku takachengeteka kubva panjodzi dzinogara munzvimbo iyi. Tinogona kurima chikafu chedu uye gadzira dzinza pamwe nevamwe vagariIzvi zvinokurudzirwa zvakanyanya sezvo kushandira pamwe kunogona kuponesa hupenyu hwedu.
Wakasiyana uye wakasarudzika mutambo senge hapana mumwe, watinowana yakanaka pasi pemvura nyika matinofanira kupinda, yakakosha pamwe ine ngozi. Tichapinda mutorwa pasi pemvura pasi mune iro hupenyu hwese marudzi ese ezvisikwa ari kufashukira. Basa redu ndere kupona panjodzi dzese dzakavanzwa, pakati padzo mhuka dzinomira, dzakaipisisa kupfuura zvadzinogona kuita pakutanga.
Tichave tichifarira kwazvo kuwana nzvimbo yekutizira kwatinogona kuzorora uye nekuda kweizvi isu tinotsvaga zviwanikwa mukati meiyo mepu yakakura. Tinogona kuvaka edu mota kuti tifambe nzendo refu uye tidzivise zvisikwa zvine njodzi inovandira mumakona ese. Subnautica mutambo unokurudzirwa zvakanyanya kana iwe uchida kunakidzwa nerakaisvonaka uye rune njodzi chiitiko.
Ndechipi chinhu chakaipisisa chingagone kuitika kwauri kana uchinge wapona tsaona inotyisa yendege? Tichafunga kuti mushure mekutambura tsaona iyi hapana chinoitika kwatiri chingatonyanya, asi protagonist yedu ine rombo rakaipa rekumhara mukati sango hombe rizere neanoshanduka kudya vanhu, nenzira yakachena makomo ane maziso. Mutambo hautipe truce, kubvira nguva dzese tinonzwa kuti pane chinhu chiri kutitarisa uye yava kuda kutirwisa. Tichinzwa kusatombokuvadzwa, hatigone kudzikisa kurinda kwedu nekuti chero nguva isu tinotofanira kutiza kana kusangana nehondo.
Ichi chiitiko chine njodzi kuseri kwemuti wega, njodzi dzatinofanira kutarisana nadzo, sosi yakanaka yekurwisa izvi ndiko kugadzirwa kwezvombo. Tichavaka misasa yedu nemoto wemoto kurwisa chando. Asi isu hatigone kuhwanda nekusingaperi, sezvo isu tichizoda kutsvaga kuti titore zvekushandisa uye zviwanikwa kuti tirambe tichifambira mberi mukunakidzwa.
Seizvo zita rinoratidzira, uyu mutambo uri zvichibva pamhepo yeConan the Barbarian. Nyika yatinozo shingairira kuti tiwanezve kubwinya kwemhuri yedu uye takunda nzvimbo dzinokwanisika. Kuti tibudirire chinangwa chedu tinofanira kuongorora nyika yakapfuma izere nezvinhu uye nzvimbo dzakazara zviwanikwa, asi nguva dzose kutarisisa mamiriro ekunze sezvo ese ari maviri kutonhora uye kupisa kunogona kuuraya. Tichasangana nevanhu vane utsinye vanhu vavengi asiwo zvisikwa.
Pakutanga zvinogona kutaridzika kunge mutambo wakakosha kwazvo kwatinongorwa nekuzorora, asi nyika yacho izere nemakona kwatichawana zvakavanzika zvakawanda zvakavanzika. Tichafanirwa kusangana nehondo pakati pemhuri, kukomberedzwa, kuvakwa kwemaguta nekudzivirira kwavo. Kana iwe uri fan of the Conan zvakasikwa, uyu mutambo uchaita kuti iwe upedze maawa ekunakidzwa.
Mumwe wemapiyona eiyo ekupona mhando paPC, inozivikanwa uye inozivikanwa kwazvo pakati pevateveri ve apocalyptic nyika yakatambudzwa nedenda re zombie. Mitambo yavo iri Pamhepo zvachose, matichasangana nevashandisi vanobva kumativi ese epasi, asi zvakare tinogona kutamba neshamwari dzedu uye kuumba timu yakanaka yekuzvidzivirira vese vakafa avo vanoda kutiparadza, uye nevavengi vevanhu vanozoda kutibira isu kuchengetedza zvese zvatakawana.
Chernarus, chiitiko chemutambo uyu nyika yakatambudzwa nekusiiwa uye kuregeredzwa kwevagari vayo nekuda kwedenda raakatambura, uko kwakangosara mumigwagwa yayo ndiko kusiri kufa. Tichafanirwa kurarama uye kungwarira nemaronda edu nekuti tinogona kutapukirwa kana kutobata zvirwere. Mamiriro ekunze akakosha zvakare uye tichafanira kuvaka matumba edu pachedu, sezvo ichave iri imwe yenzvimbo shoma kwatingave takachengeteka zvachose. Iyo yega yakadzikira inharaunda, Kugadziriswa nevatangi varombo uye vamwe vashandisi vanoita hacks kutsamwisa kune vamwe vashandisi.
State of Ruchiparara 2
Zvakawanda zvisina kufanira uye nyika zhinji yakaparadzwa nedenda, iri kadhi rekufona remutambo wekupona wevhidhiyo uyu. Mune ino kesi, mutambo wega wega wakasiyana, nekuti nguva yega yega patinotanga zvinangwa zvekuzadzikisa uye vagari vayo vanozove vakasiyana. Kwete chete isu tichafanirwa kutarisana neZombies kuti tirarame, isu zvakare tichafanirwa kunyatsoteerera kune vamwe vanhu vanozoda kupamba imba yedu.
Mutambo uri online asi mumwe chete mutambi divi rinonakidza uye rinopa mubayiro. Zvinokurudzirwa kuiridza pamhepo nedzimwe shamwari uye kubatana kuti chiitiko icho chimwe chinhu chakadzama, uko kugovana nekurwa nekujoinha mauto chichava chinhu chedu chakanyanya kunaka. Kune zvese izvi tichagara tichiwana mibairo, izvo zvinozoita kuti tifambire mberi uye nekunzwa kuti nguva dzese dzatinotamba takavandudza zvishoma.
Green gehena semusoro wenyaya pachawo unotiudza, uyu mutambo wevhidhiyo uri yakaiswa musango reAmazon. Tichava tega zvachose mune ino yakanaka asi panguva imwecheteyo nyika inotyisa, uko kwedu kukuru basa richava rekurwira kupona. Tichafanirwa kubata kwete chete kugadzira moto wekuzvibika kana kudziya isu, isu zvakare tinofanirwa kutsvaga nzira yekuvaka pekugara kana kuzviita mubako, nenjodzi iyo inosanganisira izvi.
Zvinoita kunge mutambo wekupona wakaiswa musango, kudzamara tazoona kuti protagonist yedu iri kurasikirwa nepfungwa. Ngatitii zvinokwenenzverwa zvizere mumamiriro eichi chinyorwa. Kwete chete kuti isu tinogona kufa nenzara, asi isu zvakare tichafanirwa kuporesa chero anogona kuvapo maronda kana hutachiona hwatinotambura. Inosanganisira yakapfuma yekuongorora muviri system, izvo zvinoita kuti zvive nyore kwazvo kwatiri kuti tiirape. Tinogona kunakidzwa neyekunakidzwa ndega kana mushandirapamwe wevazhinji.
MuRust ruzivo rwunotanga apo Mwari vakatipinza munyika, isina kusimira zvachose, iyo inoratidza kudiwa kwekukurumidza kuenda kumberi kurerutsa mamiriro. Tichatsvaga matombo nematanda kuita moto, kushandisa nyama kuzvidyisa uye matehwe ekupfeka. Izvi zvinoita sezviri nyore, asi mutambo uzere nevamwe vashandisi vevanhu vanonyanya kuda kutibira. Naizvozvo tinofanirwa kurwa navo kuti tikunde.
Mhuka dzesango nevanhu vanhu vanogara muRust, saka isu tichafanirwa kuvaka musha wedu uye kuusimbisa kuti tizvidzivirire kubva kwavari. Ndiwo mutambo wepamhepo saka vanhu vamwe vatambi vanobva kutenderera pasirese. Chinokosha chinhu chekugadzira, nechinangwa chakajeka pakuvaka. Tikaramba tichienda mberi tichaona izvozvo sarudzo yakanakisa ndeyekubatana nevamwe vatambi kurwisa pamwe chete panjodzi dzese uye nekugovana zviwanikwa.
Mutambo wevhidhiyo wakakurumbira wenguva dzese, pasina mubvunzo muenzaniso wakanaka kwazvo wekufarirwa kwerudzi urwu. Ndiwo mutambo wakanaka wevateereri vese asi uzere neruvengo. Icho chimiro chemusoro uyu pasina mubvunzo kugadzirwa kwezvinhu uye kuvaka kwezvivakwa. Kana zvese zvoita sekunge zvakadzikama, isu tinogona kupindirwa nevavengi, kubva kuzvisikwa kuenda kune vamwe vashandisi
Makirasi asingaverengeki evavengi anogara munyika yayo yakakura, saka zviri nyore kutora mukana wenguva yega yega kuunganidza zviwanikwa zvakawanda sezvazvinogona. Kuongorora ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvemutamboSezvo zvinoenderana nekuti isu tinokwanisa kufambira mberi here, isu tinopinda mumatare mazhinji uye nekuda kweizvi isu tichafanirwa kuve takagadzirira, zvese muzvombo nezvombo.
Isu tinopedzisa runyorwa nechimwe chinhu chakasiyana nezvimwe zvese, mutambo wekupindirana uko izvo zvatinoongorora mapuraneti manomwe kubva kune imwe nzvimbo yezuva. Tichava nekwanisi yekugadzirisa iyo terrain uye kuongorora yega yega masendimita epasi rimwe nerimwe madiro. Zvichava zvakakosha kuti utore zvese zviwanikwa sezvazvinowanzoitika mune iyi genre, pamwe nekugadzira mota kana mabhesheni ekuzorora.
Kufanana nenhengo zhinji dzorunyorwa urwu, inogona kutambwa pamwe chete, inozowedzera zvikuru sarudzo dzemutambo. Kwete chete isu tichakwanisa kuongorora pamusoro, isu tichavawo nepasi pevhu pevhu uko hupfumi hunokosha huchawanikwa huchavanzwa pamwe nezvinhu zvekuvandudza ngarava yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Musha » videogames » Iwo gumi akanakisa ekupona mitambo yePC
inoita Mavhiki e2
Manheru akanaka, handizive kana ino ndiyo nzvimbo chaiyo yekutaura pamusoro peizvi, kana zvisiri, ndinokumbira ruregerero! Nyaya iripo ndeyekuti neshamwari dzangu tinotamba tiri vega matikitivha barcelona uye ikozvino zvatiri kumba tinoda kutamba mutambo wemutikitivha pc, unogona kukurudzira mumwe here? Tiri kutsvaga kuburikidza nemawebhusaiti akati wandei uye hatina kuiwana Ndatenda!!
Huawei MatePad, ongororo: Hwendefa rinomira kune iyo iPad
Kuongorora Splashdrone 3+ muchiSpanish, iyo isina mvura drone yeSwelPro